Ankara Konya Ego Ngba Anya Mgbago Anwara Kongo | RayHaber
12 / 07 / 2019 06 Ankara, 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Turkey
Oge Akara Ankara Konya Mgbapụta Anụ Ogo Anwan Konya: Otu n'ime ụzọ ụgbọ elu dị elu na-apụ site na Ankara Konya YHT. Site na oru ngo a, nke na-eme ka ndụ dịkwuo nfe ma na-azọpụta oge, awa 1 n'etiti Ankara na Konya belatara na nkeji 50. Traingbọ a na-agba oke ọsọ bara uru na nke akụ na ụba, ọkachasị ndị njem nọ na azụmaahịa na njem ọzụzụ. CDgbọ njem TCDD ejirila ụdị teknụzụ niile na teknụzụ ọgbara ọhụrụ na ụgbọ elu ọsọ ma jisie ike tinye teknụzụ niile na sistemụ ya na nke a.
Ankara Konya High Speed ​​Train na-agba kwa ụbọchị. Ogologo oge oge ụgbọ elu ndị a bụ awa 7 na nkeji 1. Eryaman na Polatlı kwụsịrị. Nhọrọ tiketi na adi nma ma di n ’oge ndia. Ndị njem nwere onwe ha ịzụta tiketi nke ụdị ụgbọ ala ọ bụla. Traindị ụgbọ elu nke nwere ụdị ọsọ 50 n'ụdị ụgbọ elu gụnyere otu klaasị 2 + 2 pulley Econom klas na azụmaahịa 2 + 2 pulley. Oge a dị mkpụmkpụ-oge, yabụ enweghị wagon iri nri.
Ogwe oche bụ ergonomic, belt na oche oche maka ndị njem na-aga njem obi ụtọ ma dị mfe. N'ụzọ dị otú a, a na-enye ndị njem njem njem nchebe ma dị mma.
Oge Ankara Konya High Train Train Times
Ankara-Konya YHT na-apụ site na nkwụsị ụfọdụ wee mee njem site na Ankara rue Konya n'ime oge 7. N'okpuru ebe a bụ tebụl nke Ankara-Konya YHT na-esi na ọdụ ahụ pụọ na nkowa.
ọpụpụ ACCESS Polatli Konya
Ankara Konya Ahịa ụgbọ elu Ankara Konya
Ọnụ ahịa tiketi tiketi Ankara-Konya High Speed ​​Train £ 31'Dr. N'otu oge ahụ, TCDD Transport na-enye mbelata ego na ohere dị iche iche maka ụfọdụ ọrụ na ọgbọ dị iche iche. Ọ bụrụ n’ị so n’afọ ndị na-eso ya na ndị otu ọkachamara, ị ga-erite uru na uru ndị a.
Ndị nwere ikike ịnweta tiketi na-agụnye ụmụaka ndị dị n'etiti 0-6, ndị agha agha na ndị ikwu nke mbụ, ụmụ amaala nwere nkwarụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị nrite na nke mbụ.
A na-etinye ego ego 20 maka ndị njem, ndị na-eto eto, ndị nkụzi, ụmụ amaala nke 13-26, ndị òtù na-ebipụta akwụkwọ, ndị na-enweta tiketi maka 60 mmadụ, ndị òtù agha Turkish na ndị njem ndị na-azụta tiketi njem site n'otu ọdụ ahụ.
Akara Konya Fast Train tiketi Ahịa
Akara Konya Fast Train Stations